गुरुङ भाषाको पाठ्यक्रम बनाउँदै गोरखावासी
गोरखा । उत्तरी गोरखाको साविकका १४ गाविसका २२ गाउँमा बोलीचालीमा रहेको गुरुङ भाषा विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने तयारीसहित पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सदरमुकाममा हालै भएको भाषा गोष्ठीले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने गरी भाषा पाठ्यक्रम बनाउने तयारी गरेको धार्चे गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष गुरुङले बताए ।
बोलीचालीको गुरुङ भाषाका शब्द संकलन गरिसकिएको छ । एउटै शब्दलाई टोलपिच्छे फरकफरक शब्दले बोलिने भएकाले सबै शब्द संकलन गरिएका हुन् । गुरुङ भाषा पाठ्यक्रम तयार गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिका संयोजक दिलबहादुर गुरुङका अनुसार पाठ्यपुस्तकको खेस्रा तयार भइसकेको छ ।
“आउँदो शैक्षिक सत्रमा कक्षा १, अर्को वर्ष कक्षा २ गर्दै माध्यमिक तहसम्म गुरुङ भाषाबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउँछौँ” गुरुङले भन्नुभयो । बारपाक, लाप्राक, उहिया, गुम्दा, लापु, सिर्दिबास, स्वाँरा र सौरपानी, घ्याच्चोक, केरौंजा गाउँका गुरुङ समुदाय गुरुङ भाषाको पाठ्यपुस्तक बनाउन जुटेका छन् ।
स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम तयार गरी पठनपाठन गर्न संविधानले नै अधिकार दिएको छ । उत्तरी गोरखामा बोलिने भाषालाई घले समुदायले आफ्नो घले भाषाको संज्ञा दिने र गुरुङ समुदायले गुरुङ भाषाको संज्ञा दिने गर्छन् ।
उत्तरी गोरखामा बोलिने तमु भाषा भनिनुपर्ने घले समुदाय बताउँछन् । उत्तरी गोरखा तमु समाजले पाठ्यक्रम निर्माणको अगुवाइ गरेको छ ।
पहिरोले गोरखामा ३ र पर्वतमा एक जनाको मृत्यु
पोखरा । गोरखा जिल्लाको शहीद लखन गाउँपालिकामा पहिरोले घर बगाउँदा तीन जनाको ज्यान गएको छ । शहिद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर ६, अँधेरीमा मा रहेको नवराज कुँवरको घर मंगलबार पहिरोले बगाउँदा
नेपाल मेडीसिटी र माउण्टेन चाइल्डबीच गोरखाका बिरामीलाई आकस्मिक उपचार गर्ने सम्झौता
काठमाडौँ । ललितपुरको भैसेपाटिमा अवस्थित नेपाल मेडीसिटी र माउण्टेन चाइल्डबीच गोरखाका विरामीहरुलाई उपचार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल मेडीसिटीका महाप्रबन्धक विजय रिमाल र माउण्टेन चाइल्डका कन्ट्री निर्देशकले दुई पक्षको
डा. उपेन्द्र देवकोटाले जन्मथलो गोरखामा ४५ मिनेट बिताए
काठमाडौँ । वरिष्ठ न्युरो सर्जन प्रा.डा.उपेन्द्र देवकोटाको आफ्नो जन्मथलोमा पुगेका छन् । आफ्नो जन्मथलो जनाए उनको इच्छा अनुसार उनलाई आज गोरखाको पालुङ्गटार नगरपालिका–३, बोहरागाउँस्थित जन्मघरमा पुर्याइएको हो । जन्मथलोमा डा.देवकोटाले शनिबार करिब
नेपाली गोरखाकै सुरक्षा पहरामा अमेरिकी र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपतिको सिंगापुर सम्मेलन !
सिंगापुर (रोयटर्स) । यही जुन १२ मा विश्वकै दुई शत्रुदेशका नामले परिचित अमेरिका र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिबीच सिंगापुरमा हुन लागेको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनको सुरक्षा पहरा त्यहाँस्थित गोरखा प्रहरीले दिने भएको